इनिस्पेक्टर यादव किन कुखुरा सहित देखिए साइकलमा ! - Purbeli News
इनिस्पेक्टर यादव किन कुखुरा सहित देखिए साइकलमा !
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण २३, २०७४ समय: २३:१२:२६
इनरुवा । भारतीय बजारबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको कुखुरा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरी निरीक्षक अवधलाल यादव नेतृत्वको टोलीले अवैध रुपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको बोइलर कुखुरा लौकही क्षेत्रको भारतीय सीमा क्षेत्रबाट बरामद गरेको हो । साइकल छोडेर कुखुरा तस्कर भागेपछि इनिस्पेक्टरलेनै साइकल हाँकेका हुन् ।
प्रहरीलाई देखेर तस्कर फरार भएपछि प्रहरी निरीक्षक (इनिस्पेक्टर) यादव आफैंले साइकलमा लोड गरिएका कुखुरा बरामद गरी इलाका प्रहरी कार्यालय लौकहीमा पु¥याएका थिए । बरामद १०० थान कुखुरा नष्ट गरिने प्रहरी निरीक्षक यादवले बताए ।
साइकल हाँकेर यादवले कुखुरा इलाका प्रहरी कार्यालय लौकहीलाई जिम्मा लगाएका थिए । प्रहरी निरीक्षक आफैंले साइकल हाँकेर बरामद कुखुरा लिएर सडकमा हिँडेको देखेपछि सर्वसाधारण चकित परेका थिए । साइकलमा कुखुरा तस्करीको क्रममा बढेपछि प्रहरीले छड्के जाँच गरेको थियो ।